Rova Clostebol Acetate (855-19-6) hplc≥XUMX% | AASraw
Clostebol Acetate (Turinabol) poeta
/ Products / Anabolika Steroids / Serasera testosterone volo / Clostebol Acetate (Turinabol) poids
SKU: 855-19-6. Sokajy: Serasera testosterone volo, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Clostebol Acetate (Turinabol) (855-19-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Clostebol Acetate (Turinabol) video volo
Clostebol Acetate (Turinabol) poeta Characters
Name: Clostebol Acetate (Turinabol) poeta
Formula Molecular: C21H29ClO3
Meny fitetezana 364.91
Color: Vovoka fotsy na fotsy fotsy
Clostebol Acetate (Turinabol) poeta fampiasana amin'ny steroids cycle
Raw Turinabol Names powders
Ny Clostebol Acetate (Turinabol) (CAS 855-19-6), ny anaran'ny 4-chlorotestosterone, ary koa ny marika Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Ny Turinabol (Chlorodehydromethyltestosterone, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'Tbol' sy Oral Turinabol) dia endrika miovaova amin'ny Dianabol (Methandrostenolone), izay izy io dia ny firafitry ny rafitra simika Dianabol sy Clostebol (4-chlorotestosterone). Izany no mahatonga ny anarana hoe chimodehydromethyltestosterone 4-chlorodehydromethyltestosterone. Ny fanovàna ny rafitra momba ny simia dia mamela azy io ho tsy misy aromatizera ary koa manana fanamarinana ambany be ambany, izay mety ho antony i Turinabol no nomena anarana hoe 'Dianabol malemy'.
Roahina Clostebol Acetate fampiasana vovoka
Ny Turinabol dia manana valiny ambany amin'ny Xenum sy 6, ary manatsara ny toeran'ny 53, mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fampitahana ny vokatra sy ny vokatra hafa. Noho ny valiny ambany sy ny mari-pahaizana ambany dia ambany ny aknema, ny herisetra, ny hatezeram-biriky sy ny fitomboan'ny hery, saingy tsy misy tsy misy. Raha ampitahaina amin'ny hormone-ray aman-dreny Dianabol, io dia anabolika malemy ary mpanao bodybuilder dia tsy mahita an'i Oral Tbol ho toy ny mpangataka fanafody.
Turinabol dia manana ny antsasaky ny fanombanana ny anabolika Testosterone, ka ny dosages ao anatin'ny 40-60mg isanandro dia asaina ho fampidirana. Ny dosinin'i Turinabol dia mety hihoatra ny 80-100mg isan'andro, fa ny bodybuilders dia mitatitra fa misy fiantraikany ny fiakaran'ny vokatra, raha mitohy ny fandrosoana.
Noho ny fisarahany manokana amin'ny androgenic amin'ny fiantraikany amin'ny anabolika, dia aretina anabolika malemy kokoa noho ny hormonal hormonal Dianabol. Na izany aza, ny fanomezan-toky amin'ny Tbol dia fa amin'ny fahitana ny hery fanorenana, dia tsy dia misy loatra ny fiantraikan'ny androgenic effects sy ny fiantraikany eo amin'ny estrogenic (noho ny tsy fahampian'ny fiompiana ao amin'ny Estrogen). Noho ny tanjaka mahery kokoa noho ny Dianabol, ireo doses ilaina hitarihana ny fiantraikany avy amin'ny Tbol dia heverina ho avo lenta (izany dia hazavaina ao amin'ny fizarana Tbol doses ao amin'ity profil ity).
Amin'ny ankapobeny, ny atleta sy ny bakteria dia afaka manantena ny fahazoana mivaingana sy tsara karazana izay tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny gripa, gyno, na ny vokatra hafa eo amin'ny estrogenic. Ny tsy fahampian'ny herin'ny herin'ny anabolika dia ny tsy fahampian'ny herim-batana sy ny tanjaka, fa ny fitomboana mivoatra sy ny kalitaon'ny fatrany izay mitombo tsy tapaka. Izy io koa dia ampiasaina ho toy ny fanodinana fanandramana tsara mandritra ny vanim-potoana feno fatiantoka na fiomanana amin'ny fiomanana talohan'ny fifaninanana noho ny tsy fahafahany hivadika ao amin'ny Estrogen. Ny fahaiza-manaon'i Turinabol dia mamirapiratra ho toy ny fampifanarahana amin'ny steroids hafa anabolika rehefa mihazakazaka (mifandrindra) amin'ny steroids hafa anabolic noho ny fahafahany mifatotra amin'ny SHBG. Ny fametahana ny SHBG dia mamela bebe kokoa ireo steroids hafa anabolika izay natao mba hahitana ny asany, ka tsy hohadinoin'ny SHBG, izay tombontsoa hafa ananan'izy ireo.
Fampitandremana ho an'ny vovoka Rohin Rohinabol
Ny fampiharana maharitra dia mety miteraka sodium, fitehirizana ny rano, noho izany ny fihazonana sodium izay vokatry ny fivoahan'ny boge patient. Ny aretin'ny taovam-pananahana, ny fihanaky ny fo, ny oisea, ny marary prostata sy ny vehivavy bevohoka dia tsy misaina. Ny fampiasana maharitra dia mety mahatonga ny maha-lahy na vavy vavy kely.
Roahina Clostebol Acetate volo Fanoroan-dalana hafa
Ny Clostebol dia malemy AAS izay mety hampiasaina ho fampiroboroboana fampiroboroboana. Voasambotry ny Masoivoho manerantany manerantany izao izy io. Oral Turinabol, izay mampifandray ny rafitra simika amin'ny clostebol sy metandienone, dia nampiasaina betsaka tao amin'ny programa doping an'ny fanjakana tandrefana.
Matetika ny Tbol no mifandray amin'ny steroids hafa anabolika, izany dia noho ny maha-fifandraisana malemy sy ny fihenan'ny testosterone voajanahary amin'ny mpampiasa. Turinabol dia tsy anabolika na androgenika amin'ny steroïde, noho izany dia mahazo tombontsoa amin'ny Tbol ireo mpanafika. Ity anabolika marefo ity dia ampiasaina mandritra ny dingana famaranana, ny fahaverezan'ny taovam-pandevozana ary ny fiorenam-bolana.
Ny cycles Turinabol dia mety mitarika ny oral irery eo anelanelan'ny 40-60mg isan'andro amin'ny herinandro 6-8. Izany dia hanome fiakarana tsara amin'ny tanjaka, ny tazomina mahatsiravina ary mamela ny mpampiasa steroid hitazona ny hozatry ny hozatra rehefa miady amin'ny kaloria. Ny fisorohana ny famoahana proteinina dia fitaovam-piadiana tena ilaina rehefa ny fahazoana 10% ny tavy dia ny tanjona.
Ny tahirin-tsarimihetsik'i Oral Turinabol dia mety midika hoe fitambarana hafa toy ny; Ny testosterone dia azo ampiasaina amin'ny fiantraikany amin'ny herisetra. Ny fikarakarana testosterone vetivety sy lava dia azo ampiasaina. Testosterone Propionate ao amin'ny 100mg dia nanindrona ny andro hafa rehetra miaraka amin'ny Turinabol 60mg isaky ny herinandro maharitra herinandro 8 dia singa faran'izay tsara ho an'ny voan'ny muscle sy ny sakafo mandritra ny fahavaratra.
Raha mandritra ny vanim-potoana tsotran'ny Testosterone, ohatra, amin'ny fampiasana Testosterone Enanthate mandritra ny herinandro 12, dia amboara ny orinasa voalohany amin'ny 4-6 herinandro raha toa ka ny "Testosterone" dia "mitsipaka". Ity dia teny ampiasaina raha ny halavan'ny tosi-drà matevina dia eo amin'ny tampon'izy ireo ary ny vola miditra amin'ny hozatra sy proteinina dia avo indrindra.
Ny Turinabol dia afaka mamokatra hoza mahery sy maharitra maharitra. Noho izany ny atleta izay mampiasa azy dia tsy tokony hanantena hahazo haingana haingana, hery ary lanjany. Izany dia "long term" steroide anabolic.
Misaotra noho ny dosia ambany izy io, ka atahorana haingana ny vatany, izay mamindra ny metabolites amin'ny urine. Ny fitsapana amin'ny doping dia matetika tsy mahita an'i Turinabol raha manakana ny fitsaboana amin'ny andro 5 talohan'ny fifaninanana ny atleta.
Turinabol dia tsy mitarika ho amin'ny fihazonana rano noho ny fandanjana ny rano sy ny mineraly. Tsy dia androgenic raha oharina amin'ny anabolika hafa toy ny Dianabol. Io toetra io ihany koa dia manome fahafahana ny vehivavy hampiasa azy mora foana, na dia tsy maintsy mitandrina aza izy ireo tsy hihoatra ny halavan'ny fitsaboana.
Farany, ny fisoloana chlorine dia manakana ny fifandraisana amin'ny aromatase. Noho izany dia kely ny mety hisian'ny gynecomastia na ny fiovan'ny DHT.
Ho famaranana, Turinabol dia steroid tena tsara ho fanomanana ny vatanao "mazava ho azy". Ny fahaizana manamboatra ny hozatra feno dia midika fa ny atleta maro koa dia mampiasa izany mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra (ny fizaran-taona). Izany dia mamela azy ireo ho vonona sy hampatanjaka ny hozatra raha tsy mahazo fahalalam-pomba.
Rohefo volo gasy Clostebol Acetate (CAS 855-19-6)
Life Half: ora 16
Detection Time: 11 - 12 volana
Roahina Clostebol Acetate vovoka Marketing
Ahoana no hividianana voly Clostebol Acetate (CAS 855-19-6): fividianana vovoka Turinabol avy AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana 99% Clostebol Acetate vovony mena ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany.
Rova Clostebol Acetate (Turinabol) Recipes:
Ny vokatry ny vovo-poakan'ny Clostebol: Nahoana no tia Tbol ny olona?
Boldenone Acetate poids